पार्टीले टिकट दिए महिलाले जित्छन्ः वडा अध्यक्ष सापकोटा |
पार्टीले टिकट दिए महिलाले जित्छन्ः वडा अध्यक्ष सापकोटा
‘महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच परिर्वतन गर्नुछ’
प्रकाशित मिति :2017-06-02 15:40:56
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ को अध्यक्षमा निर्वाचित शोभा सापकोटाको अहिले चर्चा चुलिएको छ । महानगरका ३२ वडा मध्ये उहाँ एक्लो महिला वडा अध्यक्ष भएकाले पनि चर्चा चुलिएको हो । काठमाडौंका कुनै पनि वडामा ठूला दलहरुले समेत वडा अध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार नदिएको अवस्था र पार्टीभित्र पनि वडा अध्यक्षको उम्मेदवार पाउन ठूलै पापट बेल्नुपरेको अवस्थामा शाेभाको जितले सिगो महिलाको जित भएको छ । वि.स २०१८ सालमा पर्वतको फलेवासमा जन्मनुभएकी सापकोटा २०४२ सालबाट राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ । १५ बर्षकै उमेरमा विवाह गरि राजनीतिमा लाग्नुभएकी शोभाको संघर्ष र सफलताको कथा पनि कम रोचक छैन । साथसाथै श्रीमान सोमनाथले गर्नुभएको सहयोग आम पुरुषका लागि उदाहरण पनि । सापकोटा दाम्पतीसगँ खेमा बस्नेतले गर्नुभएको यो कुराकानी ।
विवाहपछि राजनीति सुरु
मेरो परिवारका सबै सदस्यको झुकाव कांग्रेसमा थियो, त्यसैले होला म पनि कांग्रेसमा नै बढी झुकाव राख्थे । मलाई कांग्रेस नै सबैभन्दा राम्रो पार्टी हो जस्तो लाग्थ्यो । तर विवाहपछि मेरो राजनीतिक यात्राले फरक मोड लियो । १५ बर्षकै उमेरमा बाग्लुङका सोमनाथ सापकोटासगं विवाह भयो । उहाँ तत्कालीन मालेमा हुनुहुँदोरहेछ । संगत गर्दै जाँदा उहाँको पार्टीको विचारबाट म प्रभावित हुन थाले र कम्युनिष्टमा लागे । सरकारी जागिरे मेरो श्रीमानको नेपालगञ्जमा बसाई थियो । त्यहीबाट मैले राजनीति आरम्भ गरे । २०४६ सालमा हामी काठमाडौं आयौँ । त्यसबेला नै मैले पार्टीको साधारण सदस्य लिएकी थिए । २०४६ सालमा पार्टीको साधारण सदस्य, सोही वर्ष वडा नम्बर १४ को टोलकमिटि सचिव, २०५४ सालमा पार्टी विभाजन भएपछि नेकपा एमालेको सदस्य हुँदै म २०५५।०६६ मा वडाको सचिव भएर तीन कार्यकालसम्म (१०वर्ष) काम गरेको अनुभव छ ।
छोराहरुले जागिर खान थाल्दा मैले एसएलसी पास गरे
मैले २०६६ मा एसएलसी दिदा मेरो छोराहरु पढ्न विदेश गइसकेका थिए । उतै जागिर पनि गर्थे । संयोग के प¥यो भने महानगरपालिकाको बोर्डमा महिला शसक्तिकरण र आर्यआर्जन गरेर अगाढी बढाउने कार्यक्रम हेर्न मलाई पार्टीले अफर ग¥यो । तर त्यस कामको लागि शैक्षिक योग्यता एसएलसी पास चाहिदो रहेछ । जो म संग थिएन । एसएलसी नहुदाँ म त्यो अवसरवाट बन्चित भए । त्यहीबेलादेखि मैले पढ्ने अठोट गरेकी थिए । २०६९ मा समाजशास्त्रमा आईए पास गरे ।
समाज परिर्वतन गर्छु भनेर राजनीतिमा लागे
हामी जस्ता अलि पढेका, बुझेका महिलाहरु समाजिक रुपान्तरणको बाटोमा लागेनौ भने कस्ले गर्छ भन्ने भावना बोकेर राजनीतिमा लागे । शोषित, पिडित महिलाहरुको उत्थान गर्ने, महिला अगाडी बढ्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ र आर्थिक रुपमा सवल हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिमा लागेकी हुँ ।
वडा अध्यक्षको टिकट पाउन धेरै गाह्रो भयो
वडा नं.१४ का वडा अध्यक्षको लागि ६ जनाको नाम सिफारिस भएको थियो, जसमा एक जना महिलाले मलाई समर्थन गदै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो, बाँकी ४ जना पुरुषसंग मेरो एकदमै प्रतिस्पर्धा भयो । सबैको वडा अध्यक्षमा दाबेदारी थियो । मैले चुनाव लडेपछि जित्छु भन्ने लागेकोले मैले छोडीन । वडाबाट ५ जनाको नाम जिल्ला कमिटिमा सिफारिश गरेकोमा जिल्लाले उनलाई उठाउने निर्णय गरेको थियो । उम्मेदवारको टिकट पाउन गाह्रो भएपनि मैले वडामा धेरै सामाजिक काम गरेकीले जित्छु भन्ने विश्वास थियो ।
छ जना पुरुष उम्मेदवार प्रतिस्प्रर्धी
कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा, नयाँशक्ति र दुई जना स्वतन्त्र पुरुष गरि ६ जना वडा नम्बर १४ का वडा अध्यक्षका उम्मेदवार थिए । सवै प्रतिस्प्रर्धालाई उछिन्दै म निकटतम प्रतिद्धन्दी नेपाली कांग्रेसका महेश थापा भन्दा ५१० बढी मत ल्याएर विजयी भएकी हुँ । मैले ३ हजार ८०७ मत प्राप्त गरेकी छु ।
पार्टीले टिकट दिए महिलाले जित्छन्
बास्तममा दलहरु अझै परम्परावादी सोचमा छन् । यदि पार्टीले महिलालाई टिकट दिने हो भने धेरै महिलाले जित्नेथियो । पार्टी्भित्र अझै पनि महिलालाई टिकट दिए हार्छन्, दिनुहुदैन भन्ने पुरातनवादी सोच कायमै छ । बरु जनतामा महिला आएपछि केही गर्छन् भन्ने सकारात्मक विचार आइसकेको छ ।
मेरो जित हुन्छ भन्नेमा म ढुक्क थिए
चुनावी प्रचारप्रसारको समय थोरै थियो । तर वडा नम्बर १४ मा शोभा सापकोटालाई चिनाउनुपदैन भन्नेमा म ढुक्का थिए। किनकि यहाँ मैले भुकम्पको बेलामा घर-घरमा पुगेर सहयोग वितरण गरेकी छु । क्रियाशिल महिला बचत तथा ऋण सहकारीको म अध्यक्ष हो । त्यहाँवाट पनि मैले महिलाहरुलाई विना धितोमा ऋण उपलब्ध गराएको हुँदा धेरै महिलाहरुले सिलाइकटाई लगायत विभिन्न व्यवसाय संचालन गर्नुभएको छ । वडा नं. १४ को नागरीक समाजको संयोजक, शहिद मेमोरियल अस्पतालको सञ्चालक, नेपाल एफएमको अध्यक्ष, जनपथ स्कुलको व्यवस्थापन सदस्य लगायत विभिन्न भूमिकामा समाजको लागि कार्य गरेको हुँदा पनि मैले जित्छु भन्नेमा ढुक्क थिए ।
महिला मतदाताले नै मलाई जिताउनुभएको हो
मेरो चुनावी प्रचारप्रसारमा तिन तिहाईमा २ तिहाई महिला हुनुहुन्थो । मलाई महिलाहरुले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ । मैले विकास निमार्णका काम गर्नु त छदैछ । तर मैले वडा नम्बर १४ का महिलाहरुको लागी केही गर्नुपर्छ, मैले महिलाहरुलाई उद्यमशिल बनाउन, आर्थिक रुपमा सवल बनाउन निशुल्क कार्यक्रम ल्याउनेछु । धेरै महिलाहरु विदेश जान बाध्य भएकाले आफ्नै वडामा कसरी रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भन्ने कुरा विज्ञहरुसंग छलफल गर्नेछौ ।
वडा नम्बर १४ लाई उत्कृष्ट वडा बनाउने परिकल्पना
मैले वडा नं. १४ लाई उत्कृट वडा बनाउने परिकल्पना गरेकी छु । मलाई महिलाले जिम्मेवारी लिएपछि धेरै गर्ने सक्छन् भनेर देखाउनु पनि छ । ताकि अर्को चोटी महिलाहरुलाई त्यो अवसर पाउन धेरै संघर्ष गर्नु नपरोस् । महिलाले गर्ने सक्दैनन् भन्ने सोचलाई परिर्वतन गर्नुछ मलाई । यो वडामा मैले प्रत्येक घरमा अनिर्वाय रुपमा १ वटा रुख रोप्नुपर्ने, खोलानालामा बृक्षारोपरण गर्ने, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता लिन अब सरकारी कार्यालय धाउनुनपर्ने, घरघरमा पुयाउने व्यवस्था गर्ने, सरकारी काम छिटो छरितो गर्ने व्यवस्था गर्नेछु ।
पहिलो प्राथमिकता जनताको काम छिटोछरीतो गराउने
मैले ३ वटा निर्णय गरेकी छु । पहिलो जनाताको काम छिटो छरीतो, सरल, सहज रुपमा सम्पन्न गर्ने ताकी वडावासीले जनप्रतिनिधि आएको महसुस गर्ने सकुन् । हेल्पडेक्सको व्यवस्था गर्ने र वडाको आफै भवन बनाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । म अब कुनै पार्टीको नभएर जनताको जनप्रतिनिधि भएर काम गर्नेछु । म सेवालाई १० – ५ भन्दिन । जनताको काम विहान ८ बजे हुनुपर्ने छ, भने हामी सेवा गर्ने तयार छौँ।
श्रीमानको सहयोग विना यो यात्रा अधुरो छ
म कहिलेकाही घर पुग्दा राती हुन्छ । उहाँ मलाई पर्खिएर बस्नुहुन्छ । उहाँले घरको कामदेखी बाहिरी कुरामा एकदमै सहयोग गर्नुहुन्छ । मलाई पढ्न, राजनीतिकमा आउन उहाँको एकदमै सहयोग छ । जसरी महिलाले आफ्नो श्रीमानको सफलताको लागि जेजती गछीन् त्यही मेरो श्रीमानले मेरो लागि गर्नुभएको छ । उहाँको साथ नभए यो यात्रा रोकिने थियो ।
वडा सम्हाल्ने जिम्मेवारी शोभाको हो, मेरो घरकोः श्रीमान सोमनाथ
म सरकारी जागीरे हुँदा उनी खुल्ला रुपमा राजनीतिकमा लाग्न पाइनन् । त्यसबेला त्यो वातावरण पनि थिएन । पछिल्लो समय उनी सक्रिय रुपमा राजनीतिकमा लागिन् । अहिले त म पनि सरकारी जागिरवाट रिटायर भैसकेको छु । उनलाई कामको शिलशिलामा धेरै बाहिर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले घरका काम म आफै गर्छु ।
शोभाको अबको जिम्मेवारी वडाको हो, मेरो घरको । उनको काँधमा जनताको जिम्मेवारी छ । वडालाई परिकल्पना गरेअनुरुपको राम्रो गराउने जिम्मेवारी उनीसंग छ । उनले अब वडा सम्हाल्नछीन म घर सम्हाल्दैछु । उनको प्रगति र उन्नतिमा मलाई धेरै खुसी लाग्छ ।
शोभाको परिचयबाट परिचित हुँदा मलाई गर्व लाग्छ
मेरो पनि समाजमा छुटै परिचय छ । तर आज शोभा काठमाडौ महानगरपालिकाको एक्ली महिला वडा अध्यक्ष हुँदा उनी संगै मेरो परिचय पनि फेरिएको छ । आज मलाई धेरैले महानगरको पहिलो महिला वडा अध्यक्ष शोभा सापकोटाको श्रीमान भनेर चिन्छन् यसमा मलाई गर्व छ ।
श्रीमतीका बाधाबेवधा श्रीमानले हटाउन सक्नुपर्दछ
श्रीमानलाई अगाडि बढाउन श्रीमतीले घरपरिवार, छोराछोरी हुर्काउने परम्परागत भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । तर श्रीमानले श्रीमतीको भूमिका परिर्वतन गराउन सक्नुपर्दछ । श्रीमतीका परिवारका व्यवधान, पढ्न नपाउने, रोजगार गर्ने नपाउने र आर्थिक रुपमा सवल हुने व्यवधान आफू संलग्न भएर आफूले हटाउनु प्रयास गर्ने सक्नुपर्दछ ।